imboni yezemidlalo eTshayina ichuma njengoko abatyali bafune iindlela ezintsha ukukhula - China Tianjin Shengxin Sports Iimpahla
imboni yezemidlalo eTshayina ichuma njengoko abatyali bafune iindlela ezintsha ukukhula
Fuzhou - Ukugcina i isandi nesantya ngokuthe yophuhliso, imboni yezemidlalo Chinese ukuba nenala ngo-2016 njengoko abatyali wazama ukufihla uluhlu olubanzi zamashishini, ngoxa ekufumaneni iinjini ezintsha ukuqhuba uhlumo.
Council State eTshayina likhuphe uxwebhu ngo-2014 ukuya ukwalathisa uphuhliso kushishino ezemidlalo kunye nokukhuthaza ukusetyenziswa kwezemidlalo. Akukho fayile 46 iye ithathwe sisiganeko yembali zolu shishino bokubhabha.
Imigaqo-nkqubo yephondo, ngokusekelwe uxwebhu wesizwe, ukuba ziye zakhutshwa ngexesha 2015 kwiingingqi ezahlukeneyo, kwaye kuthathwe amanyathelo ezithe ngqo kunye isixeko kanye County amanqanaba.
I-General Administration of Sport yapapasha iSicwangciso-13 iminyaka emihlanu kwi neshishini le kwezemidlalo kulo kaJulayi, kunye namanye amaxwebhu satellite ezinye 22 ukuxhasa esi sicwangciso. La maxwebhu zichaza ukuba kwimboni ziya kudlula 3 ezigidi yuan ($ 432 billion) ngonyaka wama-2020 ixabiso Ishishini xa kulindeleke ukuba ukubetha elinye ekhulwini GDP, kunye nokusetyenziswa ezemidlalo kulindeleke ukuba ukubetha 2.5 ekhulwini ingeniso ekhoyo ngomntu ngamnye ngowayesakuba .
INkqubo yeSizwe Fitness (2016-2020) kunye Ulwandlalo Healthy China (2030) nabo kulo nyaka ukunika imiyalelo ecacileyo-qhinga kazwelonke qete yabemi impilo kunye kwimboni ngokubanzi ngokunjalo.
IBhunga State wachaza iingxaki kwi zinjalo namashishini fitness kunye nexesha lokuphola ezemidlalo, unika imiyalelo njengoko imisebenzi ephambili phambili kwizikhokelo yayo ekhutshwe le-Oktobha.
Ukongeza, i-Administration Jikelele wezeMidlalo, ngokudibeneyo kunye namanye amasebe karhulumente kuzwelonke ezininzi, imigaqo-nkqubo ipapashwe kunye nezicwangciso kulo nyaka imidlalo ebusika, imidlalo yamanzi, imidlalo Aero, imidlalo esezintabeni ngaphandle kunye neminye imisebenzi.
Le nkqubo enxulumene kwimboni azikho kuqhume nje emnyameni; ke ngaxeshanye ngokwenene, ezenziwayo, nisekelwe. Baye wabeka ngaphandle imephu yendlela ukwenzela uphuhliso kushishino Chinese yezemidlalo kule minyaka izayo.
Ukumba IP phezulu, imali waya ngokubanzi
Ngendlela eyahlukileyo nto ibalasele ngamandla kukuba ukusuka igagasi lokuthenga lonke kwabonakala ngonyaka ophelileyo, abatyali-Chinese ezemidlalo ezibonakala waqalisa ukwenza ngononophelo ngo-2016 ifume indlela engcono yokwenza ushishino.
ngxilimbela eTshayina ngemiyinge Suning Group ifumene kwisibonda 70 ekhulwini abakwiqela ekhatywayo Italian Inter Milan, nesahlulo ezixabisa izigidi 270 Euro ($ 282 million), mhlawumbi iqhekeza enkulu iindaba ukuba uphume shishino kwezemidlalo kulo nyaka.
Ngelo xesha, izigaqa kakhulu enkulu eyinkunzi zitshintshela ekugxilwe kushishino ukuba uqhuba up ixabiso lemarike okuqalisa emidlalo.
inkampani lwentlalo States eTshayina networking Tencent asayina isivumelwano FIBA, ukuba iqabane lalo iminyaka elithoba elandelayo. Intsebenziswano phakathi FIBA ​​ne Tencent luya kuqhutywa kwimihlaba zokuncokola, iintlawulo intanethi, ustrimisho online kunye e-commerce.
Umda INTSEBENZISWANO ngonaphakade-yanda. Chinese real estate omkhulu Wanda Group liseke intsebenziswano kuphela kunye FIBA ​​kuba inkxaso ehlabathini lonke, kuquka ukuthengiswa amalungelo mvume kunye namalungelo somhlaba yokumaketha kwisithuba yomnyazi ezine World eyo-, ukuya 2033.
Ubambiswano lokudubula ngaphambili zasekhaya ngokunjalo. Chinese e-commerce ngokuqinileyo Ali Sports wathabatha phezu amalungelo awodwa TV for ECUBA (Chinese University Basketball Association). inkampani ividiyo Online Storm Sports kwandiswa ishishini layo ukuze iquke i-CBA (Chinese Basketball Association) kusasazo live. Kulindeleke ukuba ukhuphiswano amalungelo TV i-CBA iya kuba kakhulu ezinzima yaye bungwanyalala ngo-2017, emva kokuba CBA ifakwe inkampani yayo kulo nyaka.
Wanda Group uya wobambiswano kunye Chinese Football Association ukuba balungelelanise itumente yebhola ekhatywayo China Cup ngo-2017, wathembisa ukuyenza iziko ezaziwayo-kakuhle kwixesha elizayo. Okwa iqela Suning wenza utyalo-mali enkulu ngokuthenga amalungelo TV kuba IsiNgesi okomhlaba League, kwaye Ti'ao Dongli, amalungelo umnini kuba Chinese Super League (kusukela) iye yasekwa ngayo iziko layo TV losasazo.
Ukongeza ishishini IP, utyalo ezemidlalo waya kuluhlu olubanzi kwiindawo lonke shishino. Ngokutsho uxwebhu uphando kwi investment ezemidlalo kunye nokuxhaswa ngemali yi-arhente ezimeleyo Sports Bank, imali naye waya iinkqubo ukusebenza amabala, ukuthengisa iziganeko zemidlalo, eendaba ezemidlalo, abanxibe impahla, uqeqesho ngokwasemzimbeni kunye nokhenketho emidlalo. Emva kokuphumelela-mali, zokuqala ezininzi zoshishino nizama olunye uphuhliso ngokuhlangabezana mngeni engundoqo kokuphumelela abathengi ngaphezulu.
Zhong Bingshu, inqununu kwi Capital University of Physical Education and Sports, waxelela IXINHUA ukuba imithombo enkulu eyinkunzi balulambele amagama indima enkulu kunye namaqela ukwenza ubuqabane, kodwa ubona unyaka-on-kunyaka shift ekuziphatheni emarikeni.
"A isixa esikhulu eyinkunzi wabalekela imboni yezemidlalo, ingakumbi kwiindawo bexhamla iziganeko kunye nobuhlakani kwiiklabhu famous ngo-2015 Le ntsingiselo ophele- ngo-2016 I-abatyali bafumana kakhulu- kwaye ucinga ukufumana imali. Ukongezelela kwiziganeko zemidlalo, kukho eninzi ukumaketha ndinokuba qethe nokuba nexesha lokuphola ezemidlalo, "Zhong waphawula.
umnotho 'Imidlalo +'
ukuhlanganiswa Cross-mveliso yenye yezona zinto ke lowo shishino Chinese imidlalo uye wanda imarike waya emasimini zokhenketho, inkcubeko, imfundo, unyango, kunye yokuncokola. Uphuhliso kushishino ngokubanzi akusekho sigxile nje iziganeko ngokwabo; iindawo ezintsha likuso uvula amathuba amatsha. Ezi iindlela sokubambisana cross-mveliso zaziwa ngokuba 'ezemidlalo +' amathuba.
Thatha imidlalo + ukhenketho umzekelo omnye. million 3.38 abantu ababandakanyekayo iziganeko ezithile 311 ezemidlalo ukusuka noJan Epreli kulo nyaka, odlayo ezingama-11.9 yeebhiliyoni yuan ($ 1.7 billion) endleleni, unxibelelwano, iihotele, ukutya, kunye nezinye iinkonzo.
Official data kusukela ibonisa ukuba isayizi abaphulaphuli avareji umdlalo nganye eli xesha lonyaka ukuba 2,000 ngaphezu ngo-2015 Ukongezelela ukubukela imidlalo ubomi, abalandeli abaninzi ukubukela imidlalo nge-internet. izinto ezifanayo ababonakalayo yomnyazi, ibhola yevoli kunye netafile intenetya.
Ishishini 'ezemidlalo +' futhi udinga ukoyisa kwiintsilelo yayo ngeli nqanaba lokuqala lophuhliso yayo. Iinkampani ezininzi ezemidlalo abakwazi kufumana imigaqo-nkqubo yerhafu okukhethekileyo eminye imithetho nemimiselo yezixeko ezi iyasilela kakhulu kuphuhliso shishino.
imibutho yezemidlalo, uninzi ezingaphunyezwanga sahlaziywa kwaye kwenziwa amalungu engekho phantsi kukarhulumente, abe isandla obuthathaka abayidlalayo ekuphuhliseni ushishino. Okwangoku, kukho ukunqongophala kwezibonelelo zemidlalo kusekho ingxaki enkulu kwizixeko ezininzi.
Ukuya phambili, ochwepheshe bathi ishishini ezemidlalo, njenge inkwenkwezi entsha ukufukuka kuqoqosho eTshayina, kufuna umonde kunye nokuziphatha kwaziswa lwazi ezingundoqo endaweni ukugembula izixa ezikhulu eyinkunzi Ukufuna Impumelelo ekhawulezayo kunye neenzuzo nangoko.
ixesha Post: Jul-26-2018